29 sano jirkii noqday Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya! |
29 sano jirkii noqday Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya!
Sannadkii 1935 kii ayuu Axmed Yuusuf Ducaale ku dhashay magaalada Hargeysa. Waxabarashadiisi hoose ilaa sarena wuxu ku qaatay magaalooyinka Hargeysa iyo Sheekh. Wuxuna sanndkii 1951 kii uu waxbarasho sare ugu baxay dalka Suudaan, oo uu kaga biiray Machadka tababarka macalliminta Bakhta-Rida , halkaas oo ka soo diyaariyey laba sanno oo tababar macallinnimo ah. Markuu dalka ku soo laabtayna wuxu ku shaqeeyey macallinimadii uu soo bartay.
Wuxuna macallinnada ku hawlanaa ilaa May 1956 dii . Isagoo sannadkaana mar labaad u dhiilo dhaansaday waxbarasho sare oo dalka Masara. Wuxuna dalka Masar muddo laba sano ah kaga soo diyaariyey aqoonta Saaxafadda. Wuxuna Masar ka soo noqday sannadkii 1958 dii oo ahayd jeer ay soo carfaysay neecawadii xornimadu. Wuxuna isla sannadkaa noqday tafafatirihii Wargeyskii caanka ahaa ee Liwa oo ah Waraygeys ku hadli jiray afka xisbigii gobonnimo doonka ahaa ee N.U.F.
Wuxuna hawshaa Wargeyska hayey ilaa sannadkii 1963 kii jeerkaas oo soo bixitaankii Wargeysku uu joogsaday.
Sannadkii 1964 kii wuxu Axmed noqday mudane Baarlamaan oo laga soo doortay degmada Gebiley. Wuxuna sidoo kale noqday Wasiirkii Arrimaha dibadda ee dawladdii uu Raysal wasaraaha ka ahaa Cabdirisaaq Xaaji Xuseen. Waxayna jeerkaa uu wasiirka noqday da’diisu ahayd 29 sanno!!
Wuxuna jeerkaas Soomaaliya isagoo metelaya ka qayb galay shirar badan oo ka mida fadhiya Qaramada midoobay.
Axmed oo ahaa nin da’ ahaan yar wuxu ahaa cabqari siyaasadeed oo saamayntiisa leh. Wuxu ahaa kaadir ay xifaaltan siyaasadeed lahaayeen Raysal wasaarihii saddexaad ee Soomaaliya Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal. Kaas ay isku seegeen kala cidhiidhsigii siyaadeed ee jeerkaas dheeshiisu socotay.
Axmed oo maanta cimrigiisu yahay 86 sanno, waxa igu maqaale ah in uu ku nool yahay dalka Canada.
Xigasho: Jaamac Shube.